१. विवादै विवादको भुमरीमा फँसेको राष्ट्रिय महत्त्वको जलायशयुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विवादमुक्त भएको छ। यो जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकार आफैले बनाउने भएको छ। १२ सय मेगावाटको यो आयोजना सरकारले नै बनाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि यसको विवाद टुङ्गएिको हो। यसअघि सरकारले चीनको गेजुवा कम्पनीलाई बनाउन दिने सम्झौता खारेज गरेको थियो। २. सरकारले गेजुवा कम्पनीसँग गरेको सम्झौता सरकारको खरीद ऐन अनुसार नभएको… पुरा पढौ
१. सरकार र तत्कालीन व्रि्रोही माओवादी बीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौताले ११ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा त्यस शान्ति सम्झौता र त्यसको महत्व तथा उपादेयताबारे फेरि एक पटक चर्चा परिचर्चा भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको त्यो शान्ति सम्झौता नेपालको राजनीतिक इतिहासको महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। त्यो सम्झौता गराउन तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले अथक… पुरा पढौ
१. अफ्रीकी मुलुक जिम्बावेका सर्वाधिक लोकप्रिय ९३ वषीय राष्ट्रपति रर्बर्ट मुगावे सत्ता संघर्षको नराम्रो भुमरीमा फसेका छन्। राष्ट्रपति मुगावेले आफ्नी श्रीमती ग्रेस मुगावेलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने उद्देश्यले गत साता उपराष्ट्रपति हमर्शन मन·वालाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि त्यहाँ सत्ता संघर्ष शुरु भएको हो। सत्ता संघर्षमा सैनिकहरूले राष्ट्रपति मुगावेलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन्। २. राष्ट्रपति मुगावे जिम्बावेका सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हुन्। उनले जिम्बावे… पुरा पढौ
१. आफूलाई वाम बुद्धिजीवी भन्ने केहीले शनिवार एक वक्तव्य जारी गर्दै गोर्खा-२ बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको तीव्र आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले डा. भट्टराईलाई "अवसरवादी" भन्दै चुनावमा अवसरवादीलाई चिन्न गोरखाका पारखी जनतालाई अपिल गरेका छन्। २. अपिलमा डा. भट्टराई मार्क्सवादी विचारधाराका पक्षधर नरहेका मात्र होइनन् , उनलाई सिद्धान्तहीन अवसरवादी समेत भनेका… पुरा पढौ
खै, समृद्धिको सिद्धान्त
१. सबै राजनीतिक पार्टीरूले चुनावी घोषणा पत्र निकालेका छन्। तिनीहरू सबैले घोषणा पत्रमा समृद्धिको कुरा उल्लेख गरेका छन्। जनतालाई सपना बाँडेका छन्। तिनीहरूले गरेका ती कुरा अति भएकोले त्यसको व्यापक आलोचना भयो। त्यसरी व्यापक आलोचना भएपछि नेताहरूको स्वर केही सानो भएको थियो। तर अहिले फेरि तिनीहरूले त्यही कुरा दोहोर्‍याउन लागेका छन्। २. देश विकास गर्ने र विकास गरेर देशलाई समृद्धि… पुरा पढौ
गठबन्धन अपवित्र हुँदैन
१. राजनीतिमा आलोचना हुन्छ। आरोप-प्रत्यारोप पनि हुन्छ। सरकार गठन गर्ने बेला र चुनावको बेला पार्टीरुका बीच तालमेल हुन्छ, गठबन्धन हुन्छ। एउटा पार्टीले आवश्यक बहुमत ल्याउन नसके तालमेल र गठबन्धन गरिन्छ। यो जहाँसुकै हुने कुरा हो। नेपालमा यस्तो काम वषौर्ंदेखि हुँदै आएको सर्वविदित छ। २. यी सबै कुरा प्रष्ट छँदाछँदै पनि केही नेताहरुले अरुलाई आलोचना गर्ने क्रममा अर्काको तालमेल र गठबन्धनलाई… पुरा पढौ
हत्या हिंसा अति भयो
१. चुनावको तिथि नजिक आएको छ। चुनावको तिथि जति नजिक आएको छ, उति मतदाताहरुमा उत्साह बढेको छ। मतदाताहरु आफ्ना प्रतिनिधि छान्न व्यग्र छन्। एकातिरको स्थिति यस्तो छ भने अकोर्तिर उम्मेदवारलाई नै लक्षित गरी बम, बारुदले आक्रमण गर्ने काम पनि तीव्र भएको छ। एक हप्तादेखि प्रत्येक दिन भने झैं त्यस्तो घटना भइरहेको छ। २. सरकारले देशमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति राम्रो रहेको… पुरा पढौ
बूढीगण्डकी आयोजनाको सम्झौता
१. सोमवार मन्त्रिपरिषदको बैठकले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन चीनीया कम्पनी गेजुवा ग्रुपसँग भएको यस अघिको सरकारले गरेको सम्झौता खारेज गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थपाले सम्झौता खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनले संसदीय समितिको निदेशन अनुसार त्यो प्रस्ताव लैजानु परेकेा बताएका छन्। २. माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा गरेपछि… पुरा पढौ
१. राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यु.र्ए.इ.) को औपचारिक भ्रमणको लागि सोमवार अपरान्ह त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीको यो औपचारिक भ्रमण पाँच दिनको हुने जनाइएको छ। राष्ट्रपतिको यो भ्रमणको कार्यक्रम आइतवार मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो। २. यु.ए.र्इ.सँग नेपालको राम्रो सम्बन्ध छ। यु.ए.र्इ.मा नेपालीहरुको संख्या धेरै छ। त्यस दृष्टिमा राष्ट्रपतिको यो भ्रमणको महत्व छ। राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि त्यहाँका नेपालीहरुको समस्या… पुरा पढौ
१. देशमा चुनावको वातावरण तातिए अनुसार शान्ति सुरक्षाको स्थिति अरु सुदृढ गर्नुपर्ने खाँचो प्रष्ट देखिएको छ। शुक्रवार सोलुखुम्बुमा काँग्रेस र कम्युनिष्ट कार्यकर्ताबीच भिडन्त भयो। भिडन्तमा परेर काँग्रेसका केही कार्यकर्ता घाइते भएका छन्। रुकुममा बिना विभागीय मन्त्री जनार्दन शर्माको गाडीलाई लक्षित गरी बम प्रहार गरिएको छ। २. पोखरामा सम्पन्न प्रदेश नं. ४ र ५ को सुरक्षा गोष्ठीमा पनि सुरक्षाको खाँचो औल्याइएको… पुरा पढौ